ဒီဇင်ဘာလ 9, 2018 Denial245
ဟေး, ယောက်ျားတွေမင်္ဂလာပါ!!! သငျသညျကဲ့သို့သင်၏စိတ်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါက ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ 192.168.0.1 IP လိပ်စာ? သင်နှင့် ပတ်သက်. သိလိုပါနဲ့ 192.168.0.1 လော့ဂ်အင် ဖြစ်စဉ်, ဟုတ်ကဲ့လျှင်သင်စဉ်းစားမိသို့မဟုတ်တော့ဘူးစိုးရိမ်ရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး? သတ္တုတွင်းအပိုဒ်၏ဤဆောင်းပါး၌ကဒီမှာစေ, ငါလက်လှမ်းဖို့သင်တို့ရှိသမျှနည်းလမ်းနှင့် system ကိုပြောပြလိမ့်မယ် 192.168.0.1.
192.168.0.1 အင်တာနက်ပရိုတိုကောဗားရှင်းပုဂ္ဂလိက IP လိပ်စာဖြစ်ပါသည်4(IPv4) ကွန်ယက်ကို (ဒါဟာအစကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်အိမ်ရှင်လိပ်စာများအဖြစ်လူသိများရဲ့). ဒါဟာကြိုးမဲ့ router များသို့မဟုတ် ADSL ရဲ့ default configuration IP လိပ်စာဖြစ်ပါသည် (အချိုးမညီ Digital Subscriber Line) Netgear တူသောကုမ္ပဏီများကထုတ်လုပ် modems, D-Link, Tp-Link ကို, နှင့်အခြားသူများ. ဤအ router များ၏စီမံခန့်ခွဲမှု console ကိုဒီသွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ် 192.168.0.1 သင့် browser ပေါ်မှာ IP Address ကို.
ကို log in ကိုဘယ်လို 192.168.0.1?
➥အပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာ, တစ်ဦးကြိုးသို့မဟုတ်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်သင့်ရဲ့ Computer ကိုသို့မဟုတ် Laptop ကိုရန် router ကိုချိတ်ဆက်ပါ.
➥ Next ကို, သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဆိုက်ဘ်ဘရောက်ဇာကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်တိုင်လိပ်စာရိုက်ထည့် 192.168.0.1 ယင်းဝင်စာနယ်ဇင်းပြီးနောက်ထို့နောက်ဘရောက်ဇာကိုလိပ်စာဘားပေါ်, သင် login page ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်.
ဒီစာမျက်နှာမှာတော့➥, သငျသညျမှန်ကန်သော username နှင့် password ကိုရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်.
➥သင်သည်မေ့လျော့ခြင်းနှင့် router ရဲ့ username နဲ့ password ကိုမသိလျှင်, က router များအများစု၏ default အ username နှင့် password ကိုရဲ့အကြောင်းရင်းထိုလယ်နှစ်ဦးစလုံးတွင် "အဒ်မင်" အဖြစ် Username နှင့် Password ကိုရိုက်ထည့်ပါ.
ငါသည်ငါ့ Router ဖို့ Login မရပါ, ဘာလုပ်မလဲ?
သငျသညျစာရိုက်လိုလျှင် 192.168.0.1 browser ကိုသို့ပေမယ့်ပြီးတော့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး 192.168.0.1 သင့် router ရဲ့ IP address ကိုမဟုတျပါဘူး
သင့်ရဲ့မှန်ကန်သော IP Address ကိုတွေ့ပါမှမှန်ကန်သောလမ်း:
➥သင်တစ်ဦးနဲ့ Mac ကိုသုံးလျှင် - Applications ကိုကိုသွားပါ > အသုံးအဆောင်များ > ဂိတ်. သငျသညျ Terminal နှင့်ရောက်နေနှင့်တစ်ပြိုင်နက်, ပုံစံ"ipconfig" နှင့် > ဝင်ရောက်.
➥ သငျသညျကို Windows အသုံးပြုလျှင် - Command Prompt ကိုအဘို့သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိရှာဖွေမှု Run (CMD) . အမိန့် box ကိုဖွင့်လှစ်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, ပုံစံ "ipconfig" နှင့် > ဝင်ရောက်.
ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကြိုးမဲ့ Router Set Up လုပ်နည်း?
➥အပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာ, သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို LAN နှင့်သင်၏ router ကို ချိတ်ဆက်. (local area network) သံကြိုး.
➥ Now ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တစ်ဦးကို browser ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် https ရိုက်ထည့်ပါ://192.168.0.1 လိပ်စာဘားထဲမှာ.
➥ထိုအခါရဲ့ login page ကိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်. ယခု
➥အခုတော့ router ကိုသာကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်ကို default username နှင့် password ကိုရိုက်ထည့်ပါ.
➥ Next ကိုသင့် router Restart နှင့် SSID သို့သတ်မှတ်ထား (Service Set Identifier) နာမတျောကို. ဒါဟာအခြား devices ပြပါလိမ့်မည်ကြောင်းကိုသင်၏ router ကို၏အမည်ကိုဖွစျလိမျ့မညျ.
➥ထိုအခါကွန်ယက်လုံခြုံရေး settings ထဲမှာ password ကိုတက် Set.
➥ Now ကို, Next ကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
router သည် settings ကိုကယ်ဖို့တဦးတည်းအချိန်ပိုမို Reboot ➥.
➥ Now ကို, သင်သည်သင်၏ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုရဲ့ Service ကိုသတ်မှတ်ရန် Identifier များအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ် (SSID သို့) သင့်ရဲ့ Laptop ကိုသို့မဟုတ်ဖုန်းနှင့်အတူအမည်. အခုတော့ password ကိုရိုက်ထည့်ပါ, ထိုသို့သင့် router ရဲ့အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကိုချိတ်ဆက်ထားလိမ့်မည်.
: D Link ကိုကြိုးမဲ့ Router သည်ဝင်မည် Password ကို Set
➥အပေါင်းတို့၏ပထမတစ်ခုက browser ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် https ရိုက်ထည့်ပါ://192.168.0.1 လိပ်စာဘားထဲမှာ.
အဆိုပါ mauntenance ခလုတ်ကို➥ Next ကိုကလစ်
➥ထိုအခါအဒ်မင် Button လေးပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ
➥တဲ့ Modify ခလုတ်ကို password ကိုကလစ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ပြီးနောက်.
➥ယခုသင်သည်စကားဝှက်အသစ်နှင့်အတူ login နိုင်ပါတယ်.
ငါကအကြောင်းကိုအလုံအလောက်သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်သင့်စဉ်းစား 192.168.0.1 လော့ဂ်အင်. သင်ဤ post ကိုနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ပြဿနာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါလျှင်သင်တို့အားငါသတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုအသုံးဝင်သောမျှော်လင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့, ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်ချက်ပေးရန်ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသင့်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်. ကျွန်ုပ်တို့၏ site သွားရောက်လည်ပတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ယခင် Post မှ:192.168.1.1 || ဘယ်လို login မှ 192.168.1.1 IP Address ကို?
next Post:ယင်းကဘာလဲ 192.168.0.0 IP Address ကို?